आयुष्मान र प्रियंकालाई सटाएर, जन्मदिनमा प्रेमीसँग परमिताले साटिन औठी ! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentआयुष्मान र प्रियंकालाई सटाएर, जन्मदिनमा प्रेमीसँग परमिताले साटिन औठी !
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – लामोसमय सम्मको प्रेम सम्बन्धबाट अलग भएको जोडी आयुष्मान देशराज जोशी र परमिता आरएल राना छुट्टिएपछि पनि एक्लै रहन सकेनन् । त्यसैले त दुबैले नयाँ बाटो समाएसँगै नयाँ प्रेमी आफ्नो जीवनमा ल्याए । अझ रोचक कुरा त के बन्यो भने छुटिएपछि एकै वर्षमा दुबैले आफ्ना नयाँ प्रेमीसँग इन्गेजमेन्ट गरे ।
फिल्म ‘चपली हाइट २’ का रिल फेम परमिता र आयुष्मान लामो समयसम्म प्रेममा रहेको थिए भने उक्त फिल्म रिलिज पश्चात बिस्तारै दुबैले अलग हुने निधो गरे, आफ्नो आफ्नो नयाँ गन्तव्य रोजे । आयुष्मानले परमितालाई छाडेपछि अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई अङ्गाले । प्रियंकाले परमिताको ब्वाईफ्रेण्डलाई खोसिन् भनेर बिभिन्न गसिपहरु मात्रै बनेनन् परमिता र प्रियंकाबीच सितयुद्ध समेत चलेको चर्चा चुलियो ।
त्यसपश्चात प्रियंकासँग जोडिएका आयुष्मानले केहि समय पहिले बिहे गर्ने निधोका साथ इन्गेजमेन्ट गरे, भने एक्लिएकी परमिताले पनि ब्रेकअपको केहि समय पश्चात नयाँ साथी पाइन्, अर्थात उनले आफ्नो नयाँ ब्वाइफ्रेण्ड सार्वजनिक गरिन र अहिले उनले पनि इन्गेजमेन्ट गरेकी छिन् ।
उनले बुधबार परेको आफ्नो २५ औं जन्मदिनमा प्रेमी हिशी लेसँग औठी साटिन् ।हिशीले ‘पाम’ उर्फ परमिताको जन्मदिनको अवसर पारेर सरप्राइज औठी लगाइदिएका थिए ।
नेपाली फिल्म उधोगमा पछिल्लो क्रममा कहिले आयुष्मान र प्रियंकाको प्रेमलाई लिएर चर्चा चल्छ त कहिले परमिताको । जेहोस् यतिबेला एक समयका ‘लभ कपल’ नयाँ जीन्दगी अनि नयाँ प्रेमी प्रेमिकाका साथ निकै रमाई रहेका देखिन्छन् । परमिता अभिनित फिल्म ‘रोज’ केहि समय अगाडी प्रर्दशनमा आएको थियो भने उनि अभिनित अर्को फिल्म ‘दि कर्मा’ यतिबेला प्रर्दशनको तयारीमा छ ।
फोटो – प्रशन्न
प्रियंका र आयुष्मानको ट्याटु नाटक
paramita rl rana birthday celebration
October 30, 2018 sutraentertainment Feature News, Kollywood, News 0